Notre-Dame de Paris: Dareenka murugada iyo midnimada ee ka soo jeeda qaarada Afrika - JeuneAfrique.com - TELES RELAY
ACCUEIL » International »Notre-Dame de Paris: Dareenka murugada iyo midnimada ee ka imanaya qaarada Afrika - JeuneAfrique.com
Notre-Dame de Paris: Dareenka murugada iyo midnimada ee ka imanaya qaarada Afrika - JeuneAfrique.com
TELES RELAY 16 April 2019
« Tristesse », « catastrophe », « incrédulité » : d’Abidjan, de Dakar, du Caire, ou encore du Vatican, les réactions internationales, et notamment africaines, se sont multipliées dès lundi soir après l’incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris.
"Mid ka mid ah calaamadaha ugu weyn ee Faransiisku, Notre Dame, wuxuu ku jiray ololo dhowr saacadood ah. Anigoo ku hadlaya magaca Senegal, waxaan u muujinayaa dadaalkeena aan u hayno Faransiiska iyo bulshada Masiixiga oo dhan, "ayuu yiri madaxweynaha Senegal Macky Sall Isniintii. on account Twitter.
Dageen dab habeenkii Isniinta, sida muuqata shil, Notre Dame de Paris ayaa la qarribay, laakiin waxa uu gebi ahaanba burburay oo aan sabab u ah fara gelin ku sameeyeen dabdamiska yaa badbaadi dhismaha, Madaxweynaha Faransiiska waa Emmanuel Macron ballan-qaaday in "dib-u-dhiska". "Xumaa ayaa fogaado xataa haddii dagaal la weli si buuxda uma guuleystay," ayuu yiri madaxa gobolka bogga hore ee dhismaha burburay.
Qaab dhismeedka Notre-Dame "waa la badbaadiyaa lana xafidaa," ayaa lagu dhawaaqay dabayaaqadii dabkii fiidkii. Hase yeeshee, xayawaankii ka soo horjeeday dahabiga gothic ah, ta ugu wayn ee lagu soo booqday Yurub, iyo daaqadeeda boqolkiiba boqol, ma aysan diidin ololka.
Dabku wuxuu sababay mowjado naxdin leh oo caalami ah iyo markhaatiyo badan oo taageero ah. "Waxaan u muujinayaa wada shaqeynteena Faransiiska iyo dhammaan bulshada Masiixiyiinta," ayuu yiri Madaxweynaha Ivory Coast Alassane Ouattara.
J’exprime notre solidarité avec la France et toute la communauté chrétienne suite au terrible incendie qui a ravagé la Cathédrale Notre-Dame de Paris. #NotreDamedeParis ,#NotreDame ,#Paris
- Alassane Ouattara (@AOuattara_PRCI) April 16, 2019
Sidoo kale Côte d'Ivoire, afhayeenka hore ee golaha qaranka Guillaume Soro ayaa sidoo kale muujiyay dareenkiisa. "Marka laga soo bilaabo qaddarka Ivory Coast, waxaan ku biirayaa murugada dadka reer Faransiiska, caawa, ka dib markii ay dhacday musiibadii soo gaartay Cathedral Notre-Dame ee Paris," wuxuu sidoo kale sheegay in shabakadaha bulshada.
Madaxweynaha Burkinabe ayaa sidoo kale ka markhaati kacay murugadiisa. "Waxaan muujiyay taageerada our dib markii uu dab ka xun in halaagnay katedraalka Notre Dame de Paris, jawharad astaan ​​iyo taariikhi ah ugu soo booqday ee Europe," Twitter Roch Marc Christian Kabore.
Iyada oo dhan qalbigayga oo dhan habeenkan isniinta @EmmanuelMacron , @Anne_Hidalgo iyo dadka reer Paris.
Waxaan caddaynayaa taageeradayada kadib dabkii aan buuqnay ee burburay Notre-Dame de Paris Cathedral, oo ah sawirka ugu muhiimsan ee taariikhda Yurub iyo Yurub. Lisitaanka
- Roch KABORE (@rochkaborepf) April 15, 2019
Xitaa baabi'inta dhinaca Madagascar. "Waa murugo weyn in la barto dabka socda ee Notre-Dame Cathedral iyo in la arko sawirrada aadka u xun ee burburkii isdaba joogga ah ee qaabkan astaamaha ah ee Faransiiska iyo Masiixiyadda," ayaa ku yiri Twitter Madaxa gobolka, Andry Rajoelina.
Qaahira waxay raacday "murugo iyo qoomameyn" dabka ee Notre-Dame, oo ah "qayb ka mid ah hidaha adduunka", sida uu sheegay Wasaaradda Arrimaha Dibedda Masar.
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay António Guterres ayaa sheegay in uu "ka baqay sawirada dabka". Wargeyska ayaa sheegay in ra'iisal wasaarihii hore ee Portugal uu ku daray in fekerkiisu uu aadayo dadka iyo dawladda Faransiiska.
"Waxaan ka maqnahay ereyada iyo murugada iga baqaya markii ay arkeen dab-damiska ee Notre-Dame de Paris. Dhexdhexaadinta toddobaadka quduuska ah, ka ducayso in kharashkani ka mid yahay Masiixiyadda ee la badbaadin doono, "ayuu yiri Moses Katumbi, oo ah guddoomiyihii hore ee gobolka Congo ee Katanga.
Waxaan maqalayaa ereyada iyo murugada ayaa iga qarxiyey markii ay arkeen dabka burburay #NotreDame of Paris.
Dhexdheerta toddobaadkii quduuska ah, tuko in kharashkaan ee Masiixiyadda ay badbaadaan.
Waxaan si daacadnimo leh ula soconaa dab-demiska iyo Parisians.
- Moses Catumbi (@moise_katumbi) April 15, 2019
"Gaalnimo" ee Vatican
"Fiiri Quduuska ah ayaa bartay Gaalnimo iyo murugo news dabka laga cabsado in halaagnay katedraalka Notre Dame de Paris, calaamad u ah diinta kiristaanka, ee France iyo dunida oo dhan," jawaabay Vatican-ka, isagoo muujiyay sida uu "soo dhawaataan" oo leh Catholics French iyo Parisians.
"Waxaan u muujiyo taageeradiisa our la Church of France ee muddada quduuska ah todobaadka, waxaana rajeynayaa wanaag in this kiniisadda iyo aaminka ah", sida uu u sheegay Church Catholic ee Land Quduuska ah, war qoraal ah oo Yeruusaalem dhexdeeda.
"Mid ka mid ah maaliyada weyn ee adduunka"
Dhibaatada ayaa sidoo kale waxay keentay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump inuu falceliyo. "Waa arrin aad u adag in la aqoonsado dabkaas weyn," ayuu twitter ku yiri.
Barack Obama oo horey u ahaa ayaa la wareegay burburinta dhismaha cathedral. "Our Lady waa mid ka mid ah khasnadaha weyn ee dunida," ayuu yiri. "Waxaa noo ah dabeecadeena inaan baro murugo marka aan lumino sheekadeena - laakiin sidoo kale waa nooca aan ku dhiseyno dib u soo kabashada berri, sida adag ee aan awoodno. "
"Isagoo jooga Paris this (Isniinta) fiidnimadii, qalbigaygu wuxuu la kulmay dadka reer Faransiiska," ayuu qayb ka ahaa tweeted xaaskiisa, Michelle Obama. "Laakiin waan ogahay in Our Lady mar kale na yaabi doonaa".
Awoodda Notre Dame-taariikhda, farshaxanka, iyo ruuxaanta - ayaa neefta naga fogeeyay, faham sare oo ku saabsan cidda aan nahay iyo cidda aan noqon karno. Inaan halkan ku sugnno caawa magaalada Paris, wadnaheyga aan la joogno dadka Faransiiska. Hase ahaatee waan ogahay in Our Lady dhawaan in ay mar kale noo noqdaan. https://t.co/p1mIDMbwe1
- Michelle Obama (@MichelleObama) April 15, 2019
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore DHALINYARADA AFRICA
Xoogaga ayaa la kulmay Hydra amni daro markii ugu horeysay ee socdaalka dalka
Rikoodhkii Rwanda: Been abuurka ugu wayn ee dhamaadkii qarnigii 20aad